Dhaqaalaha Ciyaaraha Moobilka Bilaashka ah. Martech Zone
Talaado, Febraayo 21, 2012 Talaado, Febraayo 21, 2012 Adam Yar
Shirkaduhu waxay fiiriyaan inay horumariyaan isdhexgalka barnaamijyada barnaamijyada iyo barnaamijyada moobiilka ee ku ammaanaya adeeggooda; si kastaba ha noqotee, barnaamijyada madadaalada bilaashka ah ayaa badanaa la iska indhatiraa iyagoo ah bedel macquul ah.
Qaabka ganacsiga freemium ayaa la wareegaya - qiyaastii 65% dakhliga ka soo xarooday 100-ka barnaamij ee ugu badan ee ka soo xarooda App Store, qiyaastii 72% wadarta dakhliga App Store wuxuu ka yimaadaa ciyaaraha mobiilka ee freemium. Iibsashada ciyaarta sida nolosha dheeraadka ah, awoodaha gaarka ah, badeecadaha dalwaddii iyo shaqsiyadeynta shaqsiyadeed ayaa keenaya dakhliga. Ka soo Hel Elastic
Ciyaar noocee ah ayey shirkaddaada horumarin kartaa oo madadaalin karta oo la macaamili karta isticmaaleyaasha moobiilka, iyadoo kuu oggolaaneysa inaad si hufan ula xiriirto iyaga oo ku saabsan alaabadaada ama adeegyadaada?